Nkwakọ ngwaahịa ihe ịchọ mma nwere ike ime ka ngwaahịa bụrụ ihe ndị ewu ewu
Maka ụlọ ọrụ ịchọ mma, ọ dị ezigbo mkpa ịkọ igbe igbe na-adọta ndị na-azụ ahịa anya. Omume a na-ewu ewu nke ịchọ mma na-agbanwe na oge, yabụ igbe onyinye nke ụlọ ọrụ ịchọ mma. Trenddị usoro ịchọ mma kachasị dị mma na-ewu ewu s ...
Etu ịhọrọ ngwugwu nke ịchọ mma ihe nchekwa gburugburu
Taa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njirimara ịchọ mma niile na-aga n'ihu nchebe na nkwado. Maka ụfọdụ ụdị ịchọ mma, usoro ngwaahịa ha ma ọ bụ ngwaahịa niile dabere na nchekwa na nchedo gburugburu. Maka ụdị ndị ọzọ, ọ bụ ime ụfọdụ obere mgbanwe m ...
Ọrụ nke agba na igbe eji achọ mma
Colormekọrịrị nke agba nke etemeete na-ekpebi ihe mbụ ndị ahịa banyere akara na ngwaahịa. Agba na-arụ ọrụ dị mkpa na nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma, nke nwere ike ikpebi mmetụta nke ndị na-azụ ahịa ma metụta omume ha. Pantone Institute nke agba st ...